Taorian’ny 525 Andro Nitànana Azy Ireo Am-ponja , Miaro Ny Tenany Eo Anoloan’ny Fitsaràna Ireo Etiopiana Mpisera Amin’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Desambra 2015 16:39 GMT
Efa tany am-ponja nandritra ny herintaona sy tapany ny mpitoraka bilaogy Zelalem Workagegenhu sy ireo namany Yonatan Wolde sy Bahiru Degu vao natomboka ny fitsarana azy ireo tao amin'ny Fitsarana Avon'i Lideta any Etiopia.
Tamin'ny voalohany, tamin'ny 24 Oktobra, nelohina taminà fampangana maro toy ny fitarihana ny Ginbot7 ( antoko politika mpanohitra natsangan'i Dr. Berhanu Nega sy ny namany) tao an-toerana, fikotrehana hetsi-panoherana mahery vaika, ary fizarana vaovao ao amin'ny tranonkalan'ny zanaka ampielezana i Zelalem Workagenehu, mpiaro ny zon'olombelona sady mpianatra amin'ny ambaratonga ambony izay niaraka niasa tamin'ny bilaogy DeBirhan tantanan'ireo zanaka any ampielezana. Nahena ho anankiroa ireo vesatra ireo : fampidirana mpikambana ho ao amin'ny Ginbot7 ny voalohany ary fiarahana nanamora ny fanofanana momba ny fifaneraserana, haino aman-jery sosialy ary fahaizana mitarika tety anaty aterineto, izay nofoanana tato aoriana, ny faharoa.
Nisafidy ny hiaro ny tenany tany amin'ny fitsarana izy telo rehefa nosintonin’ ireo manampahefana tao amin'ny fitsarana ny fahazondàlan’ilay mpisolovava azy ireo, Temam Ababulgu, tamin'ny Jona 2015, satria nolazain'izy ireo fa misy “olana amin'ny lafiny etika”. Efa niaro mpanao gazety, mpanao politika ary solontenanà mpitondra fivavahana nanoloana ny vesatra araka ny lalàna momba ny ady amin'ny fampihorohoroana tao amin'ny firenena i Ababulgu tany aloha.
Nambaran'i Zelalem tamin'ny fitsaràna fa tsy mbola mpikambana taminà antoko politika mihitsy izy ary mino ny fiovàna tsy misy herisetra. Noho izany tsy afaka mampiditra izay ho mpikambana ao amin'ny Ginbot 7, vondrona izay miaro ireo karazana tolona izy. Nijoro ho vavolombelona mpiaro teo anoloan'ny fitsarana ny renin'i Zelalem sy ny namany, tahaka izany koa ilay mpanao politika mpanohitra, Habtamu Ayalew, ary nanamafy fa tsy nandray vola avy tamin'ny Ginbot 7 izany izy. Nohamafisin'i Zelalem ihany koa fa ny resaka nifanaovany tamin'i Yonatan sy ny olon-kafa tao amin'ny Facebook, izay isan'ny porofo ananan'ny fanjakana , dia nadika vilana mba hiampangana azy ireo.
Mbola isan'ireo vavolombelona mpiaro an'i Zelalem ilay mpanao gazety migadra Eskinder Nega sy ireo mpanao politika mpanohitra Yeshiwas Assefa sy Andargachew Tsige izay nantsoin'ny mpitsara tamin'ny voalohany. Saingy tsy nantsoin'ny fahefa-mahefa hijoro teo anoloan'ny fitsarana intsony izy ireo nandritra ny fotoam-pitsaràna dimy farany.
Isan'ny vavolombelon'i Bahiru Degu sy Yonatan Wold i Zelalem izy tenany sy ireo mpikambana sasany amin'ny mpitoraka bilaogy Zone9 ary mpanao gazety, izay vao navotsotra rehefa notànana am-ponja nandritra ny herintaona mahery noho ny fiampangana mitovy amin'izany.
Nolazain'i Bahiru fa nanontanian'ireo mpaka am-bavany izy raha toa ka misy rohim-pihavanana amin'i Dr. Berhanu Nega, mpitarika ny Ginbot 7 satria foko iray ry zareo. Nanontaniana ihany koa izy raha toa ka mifandray amin'i Andargachew Tsgie, Sekretera Jeneralin'ny Ginbot 7, izay mbola migadra amin'izao fotoana izao. Tsy misy fifandraisana amin'ireo olona ireo i Bahiru.